အမျိုးသားတစ်ဦးကို ဓါးနဲ့ထောက်ပြီး အဓမ္မကျင့်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ မိန်းကလေး ထောင်ဒဏ်တစ်သက်ကကျဖို့ ရှိ | Buzzy
အမျိုးသားတစ်ဦးကို ဓါးနဲ့ထောက်ပြီး အဓမ္မကျင့်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ မိန်းကလေး ထောင်ဒဏ်တစ်သက်ကကျဖို့ ရှိ
သူမက အသက် ၁၇ ပဲ ရှိပါသေးတယ်
အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးဟာ သူမရဲ. ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ ဘဝတစ်သက်တာကို သံတိုင်တွေရဲ.နောက်မှာ ကုန်ဆုံးရဖို့ ရှိနေတာပါ ။ သူမကတော့ မီချီကန်က Lestina Marie Smith ဖြစ်ပြိး အမျိုးသားတစ်ဦးကို ဓါးနဲ့ထောက်က အဓမ္မကျင့်ခဲ့ခြင်းအတွက် အခု ပြစ်ဒဏ်ကို ကျခံရမှာပါ။
အသကျ ၁၇ နှဈအရှယျ အမြိုးသမီးငယျတဈဦးဟာ သူမရဲ. ကနျြရှိနသေေးတဲ့ ဘဝတဈသကျတာကို သံတိုငျတှရေဲ.နောကျမှာ ကုနျဆုံးရဖို့ ရှိနတောပါ ။ သူမကတော့ မီခြီကနျက Lestina Marie Smith ဖွဈပွိး အမြိုးသားတဈဦးကို ဓါးနဲ့ထောကျက အဓမ်မကငျြ့ခဲ့ခွငျးအတှကျ အခု ပွဈဒဏျကို ကခြံရမှာပါ။
ဖြစ်စဉ်ကတော့ Saginaw မြို.မှာ အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးနဲ့ ဖြစ်ပွားခဲ့မှုပါ ။ အာဏာပိုင်တွေရဲ. အဆိုအရ သူမဟာ ကျူးလွန်ခံရသူ အမျိုးသားကို ဓါးနဲ့ထောက်ပြီး သူမရဲ. ဓမ္မတာမဟုတ်တဲ့ အဂါင်္ကို ဆက်ဆံဖို့ အတင်းအကျင် စေခိုင်းခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကျူးလွန်ခံရတဲ့ အမျိုးသားရဲ. အမည်ကိုတော့ ဥပဒေအရ ထုတ်ဖော်ပြောကြားထားခြင်း မရှိပါဘူး။
ဖွဈစဉျကတော့ Saginaw မွို.မှာ အသကျ ၁၉ နှဈအရှယျ အမြိုးသားတဈဦးနဲ့ ဖွဈပှားခဲ့မှုပါ ။ အာဏာပိုငျတှရေဲ. အဆိုအရ သူမဟာ ကြူးလှနျခံရသူ အမြိုးသားကို ဓါးနဲ့ထောကျပွီး သူမရဲ. ဓမ်မတာမဟုတျတဲ့ အဂါင်ျကို ဆကျဆံဖို့ အတငျးအကငျြ စခေိုငျးခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။ ကြူးလှနျခံရတဲ့ အမြိုးသားရဲ. အမညျကိုတော့ ဥပဒအေရ ထုတျဖျောပွောကွားထားခွငျး မရှိပါဘူး။
ယခုဖြစ်စဉ်ကြောင့် သူမဟာ ပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့မယ်ဆိုရင် ထောင်ဒဏ်တစ်သက် ကျခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ သူမရဲ. အကြောင်းကို လူမှုကွန်ယက်မှာ လူပြောများနေပြီး ၊ သူမရဲ. ဖေ့စ်ဘုခ်စာမျက်နှာမှာ သူမကို ထောက်ခံအားပေးသူတွေလည်း ရှိနေတာကို သိရပါတယ်။
ယခုဖွဈစဉျကွောငျ့ သူမဟာ ပွဈမှုထငျရှားခဲ့မယျဆိုရငျ ထောငျဒဏျတဈသကျ ကခြံရမှာ ဖွဈပါတယျ။ လကျရှိမှာတော့ သူမရဲ. အကွောငျးကို လူမှုကှနျယကျမှာ လူပွောမြားနပွေီး ၊ သူမရဲ. ဖစျေ့ဘုချစာမကျြနှာမှာ သူမကို ထောကျခံအားပေးသူတှလေညျး ရှိနတောကို သိရပါတယျ။
အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ခွေးပုံ တက်တူးလေးတွေ
၁၉ ရာစုက ကမ္ဘာ ကျော်ခဲ့တဲ့ သမိုင်းဝင် မြို့  ပြပုံရိပ်များ
''ကျောင်းမသွားချင်တဲ့ ကလေး အမှိုက်ကောက်စမ်း'' ဆိုပြီး သားဖြစ်သူကိုဘ၀အကြောင်းသင်ပြခဲ့တဲ့ ထိုင်းအမျိုးသမီး